သြဇာသက်ရောက်သူ၊ ဘလော့ဂါ၊ Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 13, 2020 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 25, 2021 Douglas Karr
အရင်တုန်းကငါရေးခဲ့ဖူးတယ် ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုချမလဲ။ ငါဖောက်သည်၏ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်မရှိသောအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလုပ်အကိုင်များရရှိသည်နှင့်အမျှဆက်ရှိနေသည်။
ပြသထိုက်တဲ့အစေးတစ်ချပ်ရဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါနှင့်အတူလူမှုမီဒီယာမဟာဗျူဟာထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည် Creative Supercool။ Supercool သည်အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုဖန်တီးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဗွီဒီယိုမျိုးပွားခြင်း၊ ပေါင်းစည်းထားသောလူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဗွီဒီယိုများ၊ တံဆိပ်တပ်ထားသောဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဝဘ်ဆိုက်များအထူးပြုသည့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကမယုံနိုင်စရာအီးမေးလ်ပဲ။
ကွင်းပြင်က စိတ်ကြိုက်။ ကျွန်ုပ်သည်စောင်ဖြတ်ပြီးငါးပိကိုပုံမှန်အားဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။ ငါကွင်းသူတို့ကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်။ ကျွန်ုပ်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်မသင်ယူနိုင်ပါကအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်သင့်သနည်း။
အစေး အချစ် ငါ့ကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုပြောပြတယ်။ PR လူအများစုကရယ်စရာကောင်းတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအီးမေးလ်ထဲကိုဖြတ်ထည့်လိုက်သည်။
အဆိုပါအစေးငါ့ကိုနှင့်အတူပေးစွမ်းသည် စြေးထား ငါ့ blog post သို့တိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်ရန်!
အဆိုပါအစေးအမှန်တကယ်ဇာတ်လမ်း (နှင့်ငါဘယ်မှာငါ visitors ည့်သည်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ) မှ link တစ်ခုပါဝင်သည်။
ကွင်းကကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေ ငါသတင်းအချက်အလက်အသုံးချနိုင်! ငါငြီးငွေ့၌တက် welled သည့်အခါဤသည်ကား ... ။ …ငါ့ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေဖို့ Darci ကငါသတင်းအချက်အလက်အပေါ်ငါဘယ်လိုပြုမူနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပြီး…ငါမှာမေးခွန်းတွေရှိရင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မှတ်စုတစ်ခုထည့်ပေးတယ်ဆိုပါစို့။
ကွင်းကထောက်ပံ့ပေးသည် နောက်ခံ ကျွမ်းကျင်သူအကြောင်းနှင့်သူနားထောင်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ကွင်းလယ်ကစားသမားသည်ဒီဂီယာနှင့်အတူအဆုံးသတ်သွားသည် အမှန်တကယ်အမည်၊ ခေါင်းစဉ်နှင့်ကုမ္ပဏီ (ငါတောင်မှသော ကြည့်လိုက်စမ်း!)
အစေးတစ်ခုရှိပါတယ် ဘေးဖယ်နေသည်! PR မှလူများသည် Outlook မှ ဖြတ်၍ အီးမေးလ်များကို ဖြတ်၍ paste လုပ်လေ့ရှိသည် CAN-SPAM လုပ်ရပ်အားချိုးဖောက်ခြင်း.
ဒါကနီးပါးပြီးပြည့်စုံတဲ့အီးမေးလ်ပါ။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုအစိုင်အခဲ B + အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသည့်တစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်အပိုင်းမှာ PR အလွန်အကျွံ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားသောခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်များနှင့်အဘယ်ကြောင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုကြားရခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ အီးမေးလ်ထဲမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားလုံးအနည်းငယ်ကြိုက်တယ်
ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ် Martech Zone အတိတ်ကဗီဒီယိုနှင့်လူမှုမီဒီယာအကြောင်းပြောခဲ့တာကိုဒါကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်
Tags: ဘလော့ဂါဘယ်လိုဆောက်ရမလဲဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဘယ်လိုထားရမလဲစာနယ်ဇင်းသမားဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတာတစ် ဦး influencer ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းစာဆရာအစေးအစေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖန်တီးမှုနင်
ဇွန်လ 16 ရက် 2011 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 44 မိနစ်
အခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ - တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ PR ခြံစည်းရိုးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ (ဆောက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရေးမကြီးပေမယ့်)၊ အလုပ်လုပ်တဲ့ ကွင်းအမျိုးအစားကို မြင်ဖို့ အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်ယူမှုအခွင့်အရေးမို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အံ့အားသင့်မိသည့်အချက်မှာ အမှတ်5ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သေးငယ်သော်လည်း ထိရောက်မှုရှိသော PR/Marketing အဖွဲ့ကို ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အလုပ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး ဤကဲ့သို့သော ကွင်းပြင်မျိုးကို ရံဖန်ရံခါ လက်ခံရရှိသည် (ခဲယဉ်းသည်၊ ၎င်းတို့ကိုလည်း ကောင်းစွာဖန်တီးပေးသည်)။
ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ ကွင်းထဲမှာ၊ အချက်5မှာပါတဲ့ အချက်အလက်အမျိုးအစားကို ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မထည့်ဖူးပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဖန်တီးဖူးတဲ့ လူတွေက ဒီအရာတွေကို သူတို့ဘာသာသူတို့ စဉ်းစားနိုင်မယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အဲဒါတွေကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မပြောချင်ပါဘူး။ သူတို့အလုပ်တွေကို လုပ်ရတာ (ဒီလိုပဲ လူတွေက ငါ့ကို ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ နည်းနည်းတော့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ပို့စ်က ဒီအနေအထားကို ပြန်စဉ်းစားမိစေတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်လုံးဝသဘောတူသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် 'ခေတ်မီ' ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှု၏ hyperconnected သဘောသဘာဝကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဒါကြောင့် ထပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇွန် 16, 2011 မှာ 12: 41 pm တွင်
ကန့်ကွက်တဲ့အမြင်ကို ဒီမှာ ယူပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဗီဒီယိုနှင့် နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် သင် သို့မဟုတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်နှင့် မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။ #1 သူ့မှာ သင့်နာမည်ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာပေမယ့် အီးမေးလ်ထဲကို အလိုအလျောက် တင်သွင်းခွင့် မပြုနိုင်ပါဘူး (မင်းရဲ့ အလုပ်ရှင်ဟောင်းက တော်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်) #5 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာကို လုံးဝသဘောတူပါတယ် ထိုအချက်အလက်တွင် သင့်ပရိသတ်အတွက် အချက်အလက်ကို အသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို သင်သိထားသင့်သော်လည်း tweet တစ်ခုသို့ လင့်ခ်သည် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် အခြားသော PR ကျင်းများ အများစုသည် ယင်းကို ကောင်းမွန်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အခြား PR များထက် ပျော့ညံ့စေသည်။ ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ ဒီကွင်းဟာ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က တစ်စုံတစ်ယောက်ဆီ သွားရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ် ဈေးရောင်းတဲ့သူကလွဲရင် ငါ့အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု ဆုံးရှုံးမှာဘဲ (ဒါပေမယ့် အဲဒီအသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ရှာဖွေမှုတွေနဲ့ မျက်လုံးတွေ ပွင့်လာနိုင်တယ်)
ဇွန် 17, 2011 မှာ 3: 26 pm တွင်
နိုင်ငံရေးနှင့် မားကတ်တင်းသည် တွဲလျက်သား ခရစ်။ အိုဘားမားကို ရာထူးတက်အောင် လုပ်လိုက်တဲ့ မားကတ်တင်းပဲလို့ ကျွန်တော် စောဒကတက်မယ်။ ၎င်း၏ 'မျှော်လင့်ချက်နှင့် ပြောင်းလဲမှု' လှုပ်ရှားမှုကို မဲဆန္ဒရှင်များက ဝါးမြိုသွားခဲ့သည်။ သူ၏နောက်လိုက်များနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး အမှန်တကယ် အောက်ခြေလူတန်းစားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ RE: #1 ငါမင်းကိုသဘောတူတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ Darci က မထိုးခင် ကျွန်တော်တို့ကို လာစစ်တာပါ... အများစု batch နဲ့ blast PR ကုမ္ပဏီတွေက မလုပ်တဲ့ အရာပါ။
16:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 22
Doug၊ လူတစ်ဦး (ဘလော့ဂါ သို့မဟုတ် ဂျာနယ်လစ်) တစ်ဦးတည်းအတွက် အီးမေးလ်တစ်စောင်အတွက် ချန်လှပ်ထားသည့်လင့်ခ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ထိုလူတစ်ဦးထံ ပေးပို့ပြီး ၎င်းသည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းရှိစာရင်းတစ်ခုနှင့် မချိတ်ဆက်ပါက မည်သို့အကြံပြုမည်နည်း။
တရားဝင် PR လူအများစုသည် အီးမေးလ် အများအပြားကို မပို့ကြသောကြောင့် ဖယ်ထုတ်ရန် မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်ကို ကျွန်ုပ် မသိပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သင့်အား ၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအီးမေးလ်များ (သင်ရွေးချယ်မှုမပါဘဲ) စာရင်းသွင်းပါက ၎င်းသည် မတူညီသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
16:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 53
မင်္ဂလာပါ Carri။ တကယ်တော့ တရားဝင် PR သမားတွေ တော်တော်များများက အီးမေးလ်တွေ အများကြီး ပို့ကြတယ်။ PR ပလပ်ဖောင်းအများစုသည် သင့်အား သတင်းထောက်များနှင့် ဘလော့ဂါများအားလုံးကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် ပေးပို့ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ Meltwater (စပွန်ဆာ) ကဲ့သို့ အချို့သောသူများသည် ၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် Unsubscribe လုပ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များ ရှိသော်လည်း အခြားအများစုမှာ မပါရှိပါ။ သင့်တွင် လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမရှိပါက၊ သင်သည် ရွေးထုတ်ခြင်းမှ ထွက်မည့် အစီအစဉ်ကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါသည်။ Outlook နဲ့ Gmail က အဲဒါကို မဖြတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာ Formstack ကဲ့သို့သော tool ကိုအသုံးပြုပြီး လူအများအား ဖောင်တစ်ခု (သို့မဟုတ် spreadsheet တစ်ခုပေါ်ရှိ Google Form) ကို ဖြည့်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်... သို့သော် ၎င်းကို ခြေရာခံရန် ခက်ခဲပါသည်။